macruufka 9 - iPhone News | Wararka IPhone (Bogga 2)
Apple waxay ogolaaneysaa inay saxiixdo macruufka 9.3.3, mar dambe macquul maahan in hoos loo dhigo si looga faa'iideysto JAILBREAK
Ku dhowaad bil kadib markii la sii daayay macruufka 9.3.4, shirkadda saldhiggeedu yahay Cupertino ayaa hadda joojisay inay saxeexdo nuqulkii hore, 9.3.3 oo la jaanqaadaya JAILBREAK.
Ryan Petrich Action Menu tweak ayaa hada la cusbooneysiiyay wuxuuna hada la jaan qaadayaa iOS 9.3.3
Kudar koox Pokémon animated ah asalka shaashadda qufulka iPhone
PokeGo LS Gif tweak wuxuu noo ogolaanayaa inaan kudarno gidaarka kooxda Pokémon shaashadda qufulka ee iPhone ama iPad
Tilmaamaha 'LockShot' wuxuu na tusayaa aragti cakiran oo ka socota shaashadda qufulka ee barnaamijkii ugu dambeeyay ee furan
LockShot wuxuu na siiyaa hab cusub oo aan ku tusno gidaarka shaashadda qufulka leh sawir jajaban oo ah barnaamijkii ugu dambeeyay ee furan
Sidee looga hortagaa nooca ugu dambeeya ee iOS 9.3.4 in lagu rakibo qalabkayaga jailbroken
Mikoto tweak wuxuu noo ogolaanayaa inaan xannibo cusbooneysiinta OTA ee iOS 9.3.3 si looga hortago aaladahayaga inay cusbooneysiiyaan iOS 9.3.4
Luca Todesco wuxuu ina tusayaa sida loo xirxiro macruufka 9.3.4
Luca Tudesco waxay mar kale muujisay in kasta oo uu xidhan yahay ka faaiidaysiga macruufka 9.2-9.3.3 ay jiraan kuwo kale oo u oggolaanaya jailbrek-ka iOS 9.3.4
IOS 9.3.4 hadda waa la heli karaa: balastar amni, jeel ayaa la xiray
Apple waxay horey usameysay macruufka 9.3.4 oo ay heli karaan dhamaan isticmaaleyaasheeda, oo ah nooc leh talaabooyin cusub oo amniga wax u dhimaya kuwa wax xira.
Baro 9 wuxuu noo ogolaanayaa inaan yareyno cabirka ogeysiisyada ku jira iOS 9
Isbedelka cusub ee ku yimid Cydia, Resero 9, wuxuu noo ogolaanayaa inaan yareyno cabirka ogeysiisyada sida ugu macquulsan.
Ma jiri doono Jailbreak qalab 32-bit ah
Pangu wuxuu xaqiijiyay in qalabka 32-bit uusan laheyn, ugu yaraan xilligan, JAILBREAK loogu talagalay iOS 9.3.3, waxayna ku sameeyeen akoonkooda cusub ee Reddit
Waxaan kuu sharraxeynaa waxa shahaadooyinku yihiin, sababta ay qaarkood u dhacayaan kuwa kalena aysan u dhicin, iyo waxa ay ku isticmaalaan macruufka 9.3.3 Jailbreak.
Tweaks la jaan qaada macruufka 9.2-9.3.3 (II)
Liis cusub oo aan kugu tusayno isbeddelada hadda la jaan qaadaya kii ugu dambeeyay ee JAILBREAK
Springtomize 3 ayaa hadda ku habboon macruufka 9.2-9.3.3
Isbedelka noo ogolaanaya inaan u qaabeyno iPhone-keena si aan xad lahayn iyo wixii ka dambeeya, Springtomize 3 ayaa horeyba ula jaanqaaday JAILBREAK ugu dambeeyay
Firfircoonida hadda waxay taageertaa JAILBREAK macruufka 9.2-9.33
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee la isticmaalay ee dhammaan noocyada kala duwan ee JAILBREAK, Activator ayaa hadda la cusbooneysiiyay isagoo la jaan qaadaya macruufka 9.2-9.33
Adeegyada goobta ma shaqeynayaan ka dib markii xabsiga laga sii daayay macruufka 9.2-9.3.3? Waxaan ku tusineynaa sida loo xaliyo dhibaatada
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ku andacoonaya in adeegyadii goobta iPhone iyo iPad ay joojiyeen shaqadii ka dib markii ugu dambeysay ee la xiro.
Liiska 'tweak' oo la jaan qaadaya macruufka 9.2-9.3.3 (II)
Liis cusub oo la cusbooneysiiyay oo aan maanta ku tusinayno kuwaas oo ah isbeddellada la jaanqaadi kara xabsiga ugu dambeeyay ee qalabka leh iOS 9.2 - 9.3.3
JAILBILA ama maya, taasi waa su’aasha
Waxaan horey u haysannay macruufka 9.3.3 ee la heli karo, laakiin cayayaanka iyo shakiga laga qabo amnigiisa ma qancin karaan dad badan oo doorbidaya inay sugaan
Shalay, Axad, ragga ka yimid Pangu waxay ugu dambeyntii bilaabeen xabsi cusub oo u oggolaanaya in laga gudbo xaddidaadda macruufka ee ...
Kama hadlin qoondada iOS 9 ee aaladaha la jaanqaadi kara in muddo ah, maadaama ay ...
Liiska xayeysiiska la jaan qaadaya macruufka 9.2 - macruufka 9.3.3
Ka dib markii la sii daayay jeelka loogu talagalay macruufka 9.2 - 9.3.3 waxaan ku tusineynaa liistada ugu horreysa ee leh isbeddelka hadda ku habboon qaabkan.
Pangu waxay sii deysaa Jailbreak macruufka 9.2 - 9.3.3
Pangu waxay billowday Jailbreak cusub oo loogu talagalay macruufka 9.2 illaa iOS 9.3.3 kaas oo laga sameeyay aaladda lafteeda oo aad hadda isticmaali karto.
Heerka korsashada IOS 9 wuxuu gaarayaa 86%
Heerka korsashada ee iOS 9 ayaa sii kordheysa. Waxay horeyba u taagan tahay 86%, oo garaacaysa heerka korsashada ee iOS 8 waqtigaan.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3.3, watchOS 2.2.2, iyo OS X 10.11.6 oo leh dayactir yar
Qayb ahaan lama filaan sababtoo ah waxaa jiray betas labadii toddobaad ee la soo dhaafay, Apple ayaa sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS 9.3.3 oo leh hagaajin yar.
iTransmission 5 waxay ku degtaa Cydia waxayna u oggolaaneysaa soo degsashada bittorrents-ka iPhone iyo iPad
Codsiga lagu soo dejinayo durdurrada ku jira iPhone ama iPad iTransmisión ayaa hadda la cusbooneysiiyay iyadoo la gaarsiinayo nooca 5, oo leh astaamo cusub.
Waxoogaa layaab leh sababtoo ah u dhowaanshaha bilaabista nooca hore, Apple ayaa sii daayay beta shanaad ee iOS 9.3.3.
Apple wuxuu sii daayaa beta afraad ee iOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6
Ka hortagga dhammaan khilaafaadka iyo inta aan sugeyno iOS labaad 10, Apple ayaa maanta sii daayay beta-kii afraad ee iOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6.
Apple wuxuu sii daayaa beta seddexaad ee iOS 9.3.3
Waxay nagu qabatay xoogaa layaab leh: Apple waxay sii deysay beta-kii saddexaad ee iOS 9.3.3, oo ah nooc, marka laga reebo layaabka daqiiqadii ugu dambeysay, uusan ku jirin wararka.
Isbarbardhiga xawaaraha ee udhaxeeya iOS 10 beta 1 vs iOS 9.3.2
Waxaan kugu tusineynaa fiidiyowyo dhowr ah hawlgalka macruufka 10 beta 1 iyo macruufka 9.3.2 qalabka ku habboon nooca tobnaad ee iOS.
Hackers ayaa muujinaya fiidiyoow xabsi ah oo loogu talagalay macruufka 9.2.1
Burcad kale oo cusub ayaa muujisay sida ay ugu suurta gasho in JAILBILYS qalabka 32-bit-ka ah oo iOS 9.2.1 lagu rakibo.
macruufka 9.3.1 dib looma saxiixin. Hoos-u-dhigista mar dambe suurtagal maahan
Sidii caadada u ahayd, Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 9.3.1, markaa waxaad kaliya rakibi kartaa ama dib ugu celin kartaa macruufka 9.3.2, oo ah nooca hadda socda.
Atlanta iyo Miami hadda waxay hayaan macluumaad kusaabsan gaadiidka dadweynaha khariidadaha Apple
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay hadda ku dartay taageerada macluumaadka gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka Miami iyo Atlanta.
Sida loo duubo fiidiyowyada shaashadda iPhone-ka ka baxsan oo aan JAILBILAAB lahayn
Maanta waxaan ku tusineynaa cayayaan yar oo noo ogolaanaya inaan video ka duubno iPhone-ka iyadoo shaashadda qalabka la dansan yahay
Apple wuxuu bilaabayaa beta-ka labaad ee dadweynaha iOS 9.3.3 iyo OS X 10.11.6
Maalin ka dib markii la sii daayay nooca soo-saaraha, Apple ayaa sidoo kale sii daayay beta-kii labaad ee dadweynaha ee iOS 9.3.3 iyo OS X 10.11.6.
Apple waxay sii deysay beta-kii labaad ee iOS 9.3.3 ee loogu talagalay soo-saareyaasha. Waa markii ugu horreysay ee ay bilaabaan 9.7-inch iPad Pro.
Apple wuxuu sii daayaa nooca casriga ah ee iOS 9.3.2 ee 9.7-inch iPad Pro
Apple ayaa soo saartay nooc cusub oo ah iOS 9.3.2 si loogu hagaajiyo cilladda qaladka 56 ee sababtay 9.7-inch iPad Pro inuu ku guuldareysto inuu kabo.
Waxaan ku tusineynaa xalka dhibaatooyinka inta badan aan la kulanno markaan doorano qoraalka si aan hadhow nuqul uga dhigno.
Soosaaraha Luca Tadesco ayaa fiidiyoow ku muujinaya sida ay suurtogal u tahay in laga xiro Safari iyada oo aan loo baahnayn in qalabka lagu xiro kombiyuutar
Isbarbardhigga xawaaraha u dhexeeya macruufka 9.3.2 iyo beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.3.3
Waxaan ku tusineynaa isbarbardhiga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 9.3.2 iyo beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3.3 ee ay Apple billowday dhowr maalmood ka hor
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.3 iyo OS X 10.11.6 ayaa hadda la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.3 sidoo kale waa la heli karaa, beta oo la yimid sidoo kale beta-kii ugu horreeyay ee OS X 10.11.6.
IOS 9 Tilmaamaha Tooska ah waxay Gaadhayaan Todobo Dal oo Kale
Markii ay Apple soo saartay macruufka 9 hadda sannad ku dhow, waxay sidoo kale soo bandhigtay toosh cusub oo ay si fudud ugu magac dartay "Raadi"….
Mar labaad soosaaraha Luca Tadesco ayaa mar kale xaqiijiyay in JAILBREAK uu diyaariyey ay la jaan qaadayaan beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 9.3.3
Haddii, sida aniga oo kale, aad u maleysay in macruufka 9.3.2 uu noqon doono nooca ugu dambeeya illaa iOS 10, waad qaldan tahay: beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3.3 ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha.
Apple wuxuu ka laabtay iOS 9.3.2 sababtoo ah dhibaatada iPad Pro 9.7 XNUMX
Apple ayaa dib ugalaabtay barnaamijka iOS 9.3.2 sababo laxiriira dhibaatada shilka ee soo gaartay qaar kamid ah 9.7-inch iPad Pros.
Ma aha sidan oo kale, Apple, sidaan oo kale: IOS 9.3.2 wuxuu burburayaa qaar ka mid ah iPad Pro oo leh Cilad 56
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa sheeganaya in iPad Pro ay u ekaadeen miisaan culus ka dib markay cusbooneysiiyaan iOS 9.3.2. Waan kuu digeynaa!
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xiriiriyeyaasha soo dejinta ee macruufka 9.3.2, oo ah nooca ugu dambeeyay ee iOS 9 ee Apple hadda bilaabay dhowr saacadood ka hor.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3.2. si loo xaliyo iPhone SE
Apple waxay hadda soosaartay macruufka 9.3.2 dhamaan aaladaha iswaafajiya xalinta dhibaatooyinka kaladuwan sida maqalka Bluetooth.
Apple wuxuu bilaabay noocii ugu dambeeyay ee iOS 9.3.2 iyada oo aan war weyn laga hayn
Apple ayaa sii daayay dhowr daqiiqo ka hor nooca ugu dambeeya ee iOS 9.3.2 oo leh cilado hagaajin iyo hagaajinta waxqabadka guud.
Sidee looga soo kabtaa dhacdooyinka kaa baaba'ay kaalandarkaaga
Waxaan kuu sharraxeynaa sababta lama filaan ah dhacdooyinka qaarkood ee kalandarkaaga ay u istaagaan inay muuqdaan iyo sida aad u xallin karto adigoo ka soo kabanaya xogtaas kaalandarka ku jirta.
IOS 9 waxay ku istaagtaa korsashada sidoo kale iibku
Xogta cusub ee Apple soo bandhigtay eek u saabsan korsashada iOS 9 waxay ina tusaysaa in qoondadu ay ahaato sidii laba todobaad ka hor.
Awoodin in lagu kaydiyo iCloud: Sababaha iyo Xalka
Waxaan kuu sharaxeynaa sababta mararka qaar aadan u heynin meel aad ku abuurto keydkaaga iCloud iyo sida aad u xallin karto
Apple wuxuu sii daayaa Beta afaraad ee iOS 9.3.2; waxaa jira qaab dadweyne
Waxay umuuqataa in Apple ay kujirto deg deg si ay usii deyso iOS 9.3.2. Haddii ay sii daayeen beta 3 usbuucii hore iyo 2 toddobaad ka hor, maanta waxay sii daayeen beta-kii afraad.
Beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 9.3.2 wuu ka dhaqso badan yahay kii hore iyo macruufka 9.3.1
Saddexdaan fiidiyow waxay muujinayaan in beta-saddexaad ee macruufka 9.3.2 uu ka dhakhso badan yahay kan labaad iyo in macruufka 9.3.1. Soo gal oo arag naftaada.
Apple wuxuu bilaabay beta seddexaad oo dadweyne oo ah iOS 9.3.2
Apple waxay sii deysay beta-kii labaad ee dadweynaha ee iOS 9.3.2, oo ah nooca ku habboon kii saddexaad ee soo-saareyaasha. Waxaan kuu sheegeynaa warkooda.
Apple wuxuu sii daayaa beta seddexaad ee iOS 9.3.2 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayay beta-kii saddexaad ee iOS 9.3.2 Talaadadii. Haddii aysan jirin daqiiqado ugu dambeeya oo layaableh, isbadal weyn lama filayo.
Apple wuxuu sii daayaa Beta Dadweynaha Labaad ee iOS 9.3.2
Saadaasha ayaa la qabtay oo Apple maanta waxay sii deysay beta-kii labaad ee dadweynaha ee iOS 9.3.2, oo ah kii ugu horreeyay ee si rasmi ah loo heli karo noocyadan.
IOS 9.3.2 Beta 2 waxay noo ogolaaneysaa inaan si wada jir ah u hawlgalno Shift Night iyo Habka Awoodda Yar
Beta-kii ugu dambeeyay ee Apple ay u siidaysay horumariyeyaasha, Habeenkii Shift iyo habka keydinta batteriga waa la wada hawlgelin karaa
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee iOS 9.3.2 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple ayaa maanta sii daayay macruufka labaad ee 9.3.2 beta. Isticmaalayaasha aan horumariyaha lahayn wali waxay sugi doonaan xoogaa dheer.
IOS 9 horeyba waxay ugu jirtay 84% aaladaha la jaan qaada
Apple ayaa sii deysay xogta cusub ee ku saabsan heerka korsashada ee iOS 9 si ay u muujiso inay horeyba ugu jirtay 84% qalabka la taageerayo.
iOS 9.3 lama sii saxeexin; hoos u dhigis dambe lama sameyn karo
Haddii aad ka fekeraysay inaad nuqul ka soo dejiso iPhone-kaaga, iPod Touch ama iPad, ma awoodi doontid. Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 9.3.
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 9.3
Apple hadda way joojisay inay saxeexdo macruufka 9.3, markaa haddii aad dhibaato ku haysato qalabkaaga oo ay tahay inaad soo celiso, waxaad ku samayn kartaa oo keliya iOS 9.3.1
Cimriga iphone waa 3 sano sida ay sheegtay Apple
Maaddaama Apple ay ku daabacday boggeeda, qayb cusub, nolosha waxtarka leh ee iPhone waa saddex sano, haddii aan dooneyno inaan sii wadno ka faa'iideysiga wararka.
Maxaa la sameeyaa haddii Aqoonsigaaga Apple uu xiran yahay
Maxaa xisaabtaada Apple loo xannibay? Maxaad sameyn kartaa si aad dib ugu hesho? Waxaan ku sharaxeynaa wax kasta oo hoose oo leh xiriiriyeyaasha bogagga taageerada.
Isbarbardhiga batteriga ee u dhexeeya macruufka 9.2.1 iyo iOS 9.3.1
Mar kasta oo Apple ay soo saarto nooc cusub oo ah nidaamka hawlgalka, adeegsadayaal badan ayaa doorbida inay sugaan ...
Isbarbar dhigga is-maamul ee u dhexeeya macruufka 9.2.1 iyo 9.3.1 [Muuqaal]
Isbarbardhig cusub oo udhaxeeya ismaamulka macruufka 9.2.1 iyo iOS 9.3.1 wuxuu muujinayaa in nidaamkii ugu dambeeyay ee hawlgalku uu bixinayo natiijooyin wanaagsan.
Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.2 iyo OS X 10.11.5
Sidii la filayay, Apple waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.2 kaliya hal maalin kadib markii ay soo saartay soosaaraha.
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.3.2 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3.2 ee loogu talagalay soo-saareyaasha. Gali oo soo hel dhammaan wararka nooca xiga ee iOS.
Apple wuxuu joojiyaa saxiixa macruufka 9.2.1, isagoo ka tagaya iOS 9.3.1 iyo iOS 9.3 oo ah xulashooyinka kaliya
Sidaad ogtahay, waxay ahayd waqti dheer tan iyo markii Apple ay ka tagtay caadadii foosha xumayd ee joojinta saxiixa nooc ka mid ah ...
Sida si fudud loogu banneeyo iPhone-kaaga ama iPad-kaaga
Waxaan kuu sharxeynaa sida loogu helo sacab sacab badan oo gigs ah qalabkeena iyadoo la adeegsanayo xeelad aad u fudud
Xaaladda hadda ee Jailbreak
Bulshada ayaa si xiiso leh u sugeysay sii deynta Apple ee iOS 9.3 oo ah tii ugu dambeysay,…
Waxaan ku tusineynaa fiidiyowyo dhowr ah oo aan ka hubin karno howlaha iOS 9.3.1 iyo iOS 9.3 ee iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s iyo iPhone 6
IOS 9.3.1 Xiriirinta Soo dejinta ee iPhone, iPod Touch iyo iPad
Waqti kasta oo aan kari karno iyo inaan wax kuugu fududeyno, maqaalkan waxaad ku leedahay xiriirinta soo dejinta ee macruufka 9.3.1 ee iPhone, iPod Touch iyo iPad.
Ma rabtaa inaad hoos u dhigto macruufka 9.3? Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Mar kasta oo nooc cusub la sii daayo, dhibaatooyin ayaa soo bixi kara. Haddii tani ay ahayd kiiskaaga, waxaan kuu sheegi doonaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu soo dejiso iOS 9.3.
IOS 9.3.1 waxay ka hortagtaa soo dirista fiidiyowyada WhatsApp
Apple ayaa sii daayay macruufka 9.3.1 shalay si loo xaliyo cilad ka hor istaagtay furitaanka xiriiriyeyaasha qaarkood, laakiin waxay jabisay qaar ka mid ah gudbinta WhatsApp.
IOS 9.3.1 xiriiriyeyaasha soo dejinta
Apple ayaa hada soosaartay nooca cusub ee iOS 9.3.1 oo hagaajinaya cilladaha 9.3 kii hore. Soo dejintu waxay noqon kartaa ...
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3.1 si loo xaliyo dhibaatada xiriiriyaha caanka ah
Apple ayaa sii deysay macruufka 9.3.1 iyada oo ujeedkeedu yahay xallinta dhibaatada ka hor istaageysa qaar ka mid ah isticmaaleyaasha inay helaan waxyaabaha ku jira xiriirada qaar.
macruufka 9.3 waa nooca macruufka ugu xasilloon muddo dheer
Falanqeyn ayaa muujineysa in macruufka 9.3 uu yahay nooca ugu xasiloon ee macruufka sanadihii la soo dhaafay, laakiin miyuu u deggan yahay sida macruufka 6-da ah ee muddada dheer la sugayay?
Apple wuu ogyahay cilladaha iskuxiraha iOS 9 wuxuuna balan qaadayaa xal dhowaan
Akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha la ildaran dhibaatada isku xidhka IOS 9: Apple way ka warqabtaa dhibaatada waxayna hore u balan qaaday xalka.
IOS 9.3 waxay noo ogolaaneysaa inaan ku daawano filimada Dolby Surround 7.1
Haddii aad u isticmaasho iPad-ka shaashad ahaan, waa inaad ogaataa in laga bilaabo macruufka 9.3 aad ku xidhi karto kuwa ku hadla oo aad ku raaxeysan karto codka Dolby Digital Surround 7.1
Sida loo soo dejiyo waraaqaha cusub ee iPhone SE iyo iPad Pro
Waxaan ku tusineynaa waraaqaha cusub ee Apple ku isticmaashay iPhone SE iyo 9,7-inch iPad Pro si aad u soo dejiso.
Aynu aragno haddii ay garaacayaan furaha: Apple wuxuu bilaabay nooc cusub oo ah iOS 9.3 si loo xalliyo guuldarada hawlgelinta
Apple waxay soo saartay nooc cusub si ay u saxdo dhibaatada hawlgelinta ee qaar ka mid ah isticmaaleyaasha iPads-kii hore ay la kulmaan.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ka cabanaya dhibaatooyinka ku saabsan Safari ee iOS 9.3 [UPDATED]
IOS 9.3 waxay umuuqataa inay dhibaato badan ugeysaneyso isticmaaleyaasha qaar adoo ka hortagaya furitaanka xiriiriyeyaasha Safari.
Dhibaato kaa haysata xiriiriyeyaasha ku jira macruufka 9.3? Isku day xalalkan
IOS 9.3 waxay la timid cilad ka hortageysa qaar ka mid ah isticmaaleyaasha inay marin u helaan xiriirada ka imanaya barnaamijyada. Haddii aad la kulantid dhibaatada, iskuday xalalkan.
Apple wuxuu sii daayaa nooc cusub oo ah iOS 9.3 si loo xaliyo dhibaatada hawsha
Apple ayaa soo saartay nooc cusub oo ah iOS 9.3 si loo saxo cilladda ay isticmaaleyaasha qaar ku arkeen iPad 2.
IOS 9.3 waxay ka dhigeysaa qaar ka mid ah Ipad-da duugga ah kuwo aan waxtar lahayn
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iOS 9 waxay keenaysaa in ka badan hal madax xanuun, gaar ahaan milkiilayaasha ipad 2, kaniiniga ay Apple soo saartay 2011.
Xiriirinta tooska ah ee soo dejinta ee macruufka 9.3 nooca ugu dambeeya
Kadib bilooyin badan oo betas ah, ugu dambeyntii nooca ugu dambeeya ee macruufka 9.3 horeyba waa loo heli karaa banaanka ...
Sugitaanku wuu dhammaaday: Apple waxay sii deyneysaa macruufka 9.3. Kuwani waa warkooda oo dhan
Sugitaanku wuu dhammaaday. Ka dib markii aan ka yarayn siddeed betas, Apple waxay soo saartay macruufka 9.3. Gali oo soo hel wax kasta oo ku imanaya daahfurkaan.
Sida loo kiciyo habka lacag bixinta degdegga ah ee iPhone
Inta aan sugeyno imaatinka amarka degdegga ah ee iPhone-ka, waxaan adeegsan karnaa xeeladdan yar si aan u dedejino.
Si aan ugu raaxeysano macluumaadka ama adeegyada internetka gebi ahaanba bilaash, waa inaan maanka ku haynaa in qofna uusan shaqeynin ...
Heerka korsashada IOS 9 wuxuu gaarayaa 79%
Fadhiidnimo ka dib oo aysan jirin wax kordhin ah oo ku saabsan saamigeeda suuqa, macruufka 9 mar kale wuxuu u arkaa kororkiisa oo gaaraya 79%.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3 beta toddobada horumariyeyaasha iyo si guud
Waxaa nagu qabsaday lama filaan waqtiga, maahan wax aad u badan maalintii, laakiin Apple waxay hadda sii deysay macruufka 9.3 beta 7 ee loogu talagalay horumarinta iyo si guud.
Waxa la sameeyo haddii aad ilowday furaha qufulkaaga iPhone ama iPad
Waxaan kuu sharaxeynaa waxyaabaha kale ee aad heysato haddii aad ilowday furahaaga sirta ah si aad u furto iPhone-kaaga ama iPad-kaaga adigoon waayin macluumaadka ay ku jiraan.
Ma hoos u dhigi karaa macruufka 9.1 si aan u xir-xiro?
Dhowr maalmood ka hor, Shiinaha ka yimid Pangu waxay billaabeen xabsi cusub oo loogu talagalay qalabka iOS ...
Shalay iyo ogeysiis la'aan, Google ayaa bilaabay waxa noqon doona nooca xiga ee nidaamka hawlgalka Google ee qalabka ...
Apple waqti ma dhumin waxayna bilaabeysaa beta-kii lixaad ee iOS 9.3
Tufaaxu waqti ma dhumin. Toddobaad ka dib beta-kii ugu dambeeyay, waa wareegga lixaad beta ee iOS 9.3. War noocee ah ayey keeni doontaa?
Si wada jir ah uga saar bogag badan oo shabakadda Safari taariikhda ah (Tweak)
Safari, oo ah biraawsarka asalka ah ee ku rakiban iOS, waxaan u tixgelin karnaa biraawsarka ugu fiican ee aan ku isticmaali karno ...
Apple waxay ku darsataa xogta taraafikada Singapore iyo Malaysia
Apple waxay sii wadaa balaarinta macluumaadka ay ka bixiso taraafikada wadamada cusub. Kuwii ugu dambeeyay ee lagu daray ...
IOS 9.3 beta 5 wuxuu joojiyaa Shift Night in hab awood yar
IOS 9.3 sidoo kale waxaa ku jira wararka ku saabsan sida aan u isticmaali doono Shift Night, sida u qaabeynta marka aan rabno inay si otomaatig ah u shaqeyso.
IOS 9.3 waxaa ku jira ikhtiyaar cusub oo lagu cusbooneysiin karo cusbooneysiinta
Beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 9.3 waxaa ku jira hab cusub oo lagu maareeyo cusbooneysiinta softiweerka otomaatiga ah, wax aan ku jirin beta-kii hore.
IOS 9.3 ayaa u oggolaan doonta maamulahaaga inuu ku dabakho xaddidnaantaada iPhone-ka
IOS 9.3 waxay la imaan doontaa warar badan oo xiiso leh, laakiin qaar iyaga ka mid ah waxay u noqon doonaan kuwa xun, tan iyo markii madaxdeena uu xaddidi karo waxyaabaha.
Apple ayaa maanta sii deysay macruufka 9.3 beta 5, labadaba kuwa horumariya iyo nooca dadweynaha. Haddii aysan jirin wax la yaab leh, nooca soo socda ayaa horeyba u noqon doona midka rasmiga ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay Jailbreak na siiso ayaa ah inaan u habeyn karno qalabkeena sida aan jecelnahay, sida iska cad gudaha ...
Websaydhka Maamulaha Iskuulka Apple ayaa hadda laga heli karaa beta
Iyadoo si rasmi ah loo sii daayay macruufka 9.3 maalin kasta wuu soo dhowaanayaa, Apple wuxuu horey u furay bogga Maareeyaha Iskuulka Apple, laakiin waxay ku jirtaa beta.
Beta-kii ugu dambeeyay ee macruufka 9.3 dib looma biclayn sababtoo ah cilladdii taariikhda 1970
Nooca soo socda ee iOS, oo la filayo in si guud loo sii daayo wax ka yar hal bil, uma nuglaan doono inuu wax iibsado taariikhda 1970.
Heerka korsashada ee IOS 9 wuxuu joogaa 77% aaladaha la taageero
Heerka korsashada ee iOS 9 isma beddelin tan iyo markii ugu dambeysay ee ay Apple daabacdo xogta kor ku xusan. IOS 9 miyaa la kulmaya "gaabis"?
Apple wuxuu ka saaray shaqadii qalinka Apple ee iOS 9.3
Imaatinka iPad Pro wuxuu noo keenay stylus loo yaqaan 'Apple Pencil'. Laakiin Apple aad uma maaweelin ...
Apple wuxuu sii daayaa noocyada dadweynaha ee iOS 9.3 beta 4 iyo OS X 10.11.4 beta 4
Waxay ahayd maalin hore, laakiin ma dhihi karno waan la yaabnay: Apple waxay sii deysay beta-kii afraad ee dadweynaha iOS 9.3.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3 beta 4 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysay beta-kii afaraad ee iOS 9.3 oo loogu talagalay soosaarayaasha daqiiqado ka hor. Cusbooneysiinta ayaa horeyba looga heli karaa ...
macruufka 9.3 noo oggolaan doonaa inaan ka badbaadin music ka codsiyada-dhinac saddexaad ee iCloud
IOS 9.3 waxaa ku jiri doona muuqaal cusub oo noo oggolaan kara inaan maamulno maktabaddeenna muusiga iyadoo aan loo baahnayn kombuyuutar.
IOS 9.2.1 Xiriirinta Soo dejinta ee hagaajinaya Khaladaadka 53
IOS 9.2.1 xiriiriyeyaal toos ah oo lagu soo dejiyo, nacaybka cusub ee ay sii daayaan tufaax hagaajinaya Khaladka 53.
Apple wuxuu sii daayaa Nooca la cusbooneysiiyay ee iOS 9.2.1 ee loogu talagalay iPhone-yada uu ku dhacay Error 53 iyo raali galin
Apple waxay soo saartay nooc casriyeysan oo ah iOS 9.2.1 oo leh hal ujeedo: inay awood u yeelato inay toosiso aaladaha ay khaldeen qaladka caanka ah 53.
Apple vs. FBI: Asturnaanta iyo Amniga
Dhacdooyinkii ka dhacay San Bernardino iyo codsigii FBI-da ee Apple ay ku fureen dood xiiso leh oo ku saabsan waxa guuleysan kara, amniga ama arrimaha gaarka ah
Ku dhig taariikhdan taleefankaaga iPhone-ka oo gabi ahaanba wuu xirnaan doonaa
Taariikhda ayaa awood u leh inay ka tagto iPhone-gaaga gebi ahaanba qufulan adigoon awoodin inaad ku xalliso dib u soo celinta. Waa cayayaanka jira illaa iOS 8.
Wax yar oo tirooyinka korsashada ee iOS 9 ayaa soo hagaagaya, gaar ahaan marka ciidaha Kirismaska ​​laga gudbo ...
Sidii aan fileynay, Apple waxay soo saartay beta-kii saddexaad ee dadweynaha ee iOS 9.3 dhowr daqiiqo ka hor, sidaa darteed isticmaale kasta ...
Apple wuxuu sii daayaa beta seddexaad ee iOS 9.3
Waxoogaa yaab ah, Isniinta, laakiin Apple waxay sii deysay beta-kii saddexaad ee iOS 9.3. Waqtigan xaadirka ah, waxay umuuqataa inay kaliya u tahay horumariyeyaasha.
Apple wuxuu joojiyaa inuu ku saxiixo iOS 9.2 aaladaha qaar
Sidii caadada u ahayd markasta oo ay Apple soo saarto cusbooneysiin ku saabsan IOS, maalmo yar ka dib waxay joojisaa saxiixa ...
Ma waxaad sugeysaa JAILBREAK, sax? Waa hagaag tahay, lagana yaabee, talobixinta Pangu ee ah in loo cusbooneysiiyo iOS 9.2.1 macnaheedu waa inay dhowdahay.
Ka raadi internetka shaashad kasta oo iphone-kaaga ah
Marar badan markaan ku jirno Facebook ama Twitter, ama markay noo soo diraan e-mayl waxaan rabnaa inaan si dhakhso leh u raadino qaar ...
Muuqaal cusub oo laga helay beta-kii labaad ee iOS 9.2. Waxay la xiriirtaa iPad Pro, qalabkiisa iyo raaxadiisa.
IOS 9 waxaa laga helaa 76% qalabka taageera
Heerka korsashada ee iOS 9 waxay umuuqataa inay ku dhacday biriiga tan iyo markii aan bilownay sanadka. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, boqolkiiba isticmaalayaasha waxqabadka sameeyay
Tijaabada xawaaraha macruufka 9.3 Beta 2 vs iOS 9.2.1
Isniintii la soo dhaafay Apple waxay soo saartay beta-kii labaad ee iOS 9.3 laakiin ilaa shalay Arbacadii dadka isticmaala ee aan ...
Apple wuxuu sii daayaa Beta Dadweynaha Labaad ee iOS 9.3
Laba maalmood ka dib markii la soo saaray beta beta, Apple ayaa sidoo kale sii daayay beta-kii labaad ee dadweynaha ee iOS 9.3.
Apple wuxuu bilaabay beta labaad ee iOS 9.3
Apple waxay naga wada yaabisay bilowgii beta-kii labaad ee iOS 9.3 oo aan xasuusano inay ku imaan doonaan warar muhiim ah sida Night Shift.
Sidee looga hortagaa habka awoodda hoose inuu damiyo iPhone (tweak)
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee iOS 9 na keenay, taas oo horeyba ugu jirtay Android iyada oo loo marayo ...
IOS 9.3 Qalabka Iswaafajinta Habeenkii IOS
Ma rabtaa inaad isticmaasho habka habeenka ee iOS 9.3? Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin. Gali oo hubi liiska aaladaha la jaanqaadaya Shift Night ee macruufka 9.3.
Apple waxay bixisaa macluumaad ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee Mexico iyo Hong Kong
In kasta oo ay qaadaneyso wax ka badan intii caadiga ahayd, Apple waxay si tartiib tartiib ah u dhowreysaa eraygeeda oo ay ku kordhineysaa macluumaad ...
Habka habeenka ee iOS 9.3 wuxuu marin toos ah uga heli doonaa xarunta kontoroolka
Habka habeenka ama wareega habeenkii, sida ugu dambayn loo tarjumay, wuxuu noo oggolaan doonaa inaan dhaqaajino oo ka joojino shaqadan xarunta kontoroolka.
Maaddaama mar kasta oo la soo saaro nooc cusub oo macruufka ah, waxaan horeyba u haysannaa isbarbardhigga xawaaraha ee u dhexeeya macruufka iyo macruufka 9.2.1. Ayaa guuleysan doona?
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo bar macruufka ah ee Safari markaan wax raadineyno.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.2.1. Ma bilaabi doonaan JAILBREAK hadda?
Apple waxay sii deyneysaa nooca iOS 9.2.1, oo ah sii deyn niyad jabineysa isticmaaleyaal badan oo aysan ku jirin warar caan ah. Iyaguna ma bilaabi doonaan JAILBREAK?
Luqadda Swift waxay noqotay mid caan ku ah horumariyeyaasha laakiin Apple uma aysan helin
Waxay u muuqataa in tan iyo markii la bilaabay luqadda barnaamijka Swift, injineerada Apple ay adeegsadeen ugu yaraan.
Sida loo nadiifiyo taariikhda Safari iyo xogta ku saabsan macruufka
Ka nadiifinta taariikhda iyo xogta Safari ee iPhone waa mid aad u fudud. Waxaan ku tusaynaa sida.
Sida loo hagaajiyo xawaaraha saxaafadda ee badhanka bilowga
Thanks to goobaha helitaanka waxaan dejin karnaa xawaaraha riixida batoonka guriga ee iPhone-keena.
Tilmaamaha baytariga ee iPhone-ku uma shaqeynayo sidii la rabay
Arrintii ugu dambeysay ee isticmaaleyaasha iPhone 6s iyo 6s Plus ay la kulmaan waxay la xiriirtaa tilmaame batteriga.
Apple waxay aqoonsan tahay cilad ku timaada barta batari ee iPhone 6s iyo 6s Plus taas oo aan tilmaami karin boqolkiiba inta dhabta ah ee soo hartay.
Sida loo dejiyo Habeenkii Habeenkii cusub ee iOS 9.3
Waxaan sharaxaad ka bixinaynaa sida habka habeenka cusub uu u shaqeeyo macruufka 9.3 kaas oo noo oggolaanaya inaan si fiican u nasanno
PrettyRespring hab kale oo dib loogu bilaabo iPhone
Adoo adeegsanaya barnaamijka 'PrettyRespring' waxaan ku badali karnaa habka aan iPhone dib ugu bilaabano.
Beta-ka cusub ee OS X 10.11.4 wuxuu taageeraa Sawirro Toos ah
Beta-kii ugu dambeeyay ee OS X, wuxuu noo keenay muuqaal ah inay ahayd inuu la yimaado xasiloonida iyo qaabka ugu dambeeya ee El Capitan
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Galaxy S7 cusub wuxuu lahaan lahaa shaqo aad ugu eg Sawirada Tooska ah
Apple ma lumiso waqti sidoo kale waxay sii deysaa macruufka 9.3 beta 1.1
Tufaaxu waqti ma dhumin. Isniintii la soo dhaafay waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.3, laakiin cilad ayaa la soo sheegay oo qasabtay soo saarista beta version 1.1
Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3
Sugiddu aad uma dheereyn. Saddex maalmood ka dib beta beta, Apple ayaa sii daayay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.
macruufka 9.3.1 Beta 1 vs iOS 9.2 Benchmark
Isbarbardhiga xawaaraha iyo waxqabadka beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 9.3 iyo nooca 9.2 ee iOS
Beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.3 wuxuu noo oggolaanayaa inaan qarinno codsiyada ku yimaada macruufka macruufka. Ma arki doonnaa markii si rasmi ah loo sii daayo?
IOS 9 horeyba waxay ugu jirtaa 75% qalabka taageera
Nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka ee IOS wuxuu horeyba ugu jiraa 75% qalabka taageera maanta.
IOS 9.3 waxay muujineysaa inta xog ee ay cuneyso taageerada Wi-Fi
IOS 9.3, oo betakiisii ​​ugu horreeyay la sii daayay Isniintii la soo dhaafay, wuxuu muujinayaa inta xog ee taageerada Wi-Fi ay isticmaasho si looga fogaado lama filaanka xun.
IOS 9.3 ugu dambayntii waxay keentaa xisaabaadka isticmaalaha iPad-ka, inkasta oo leh nuances
Apple waxay ku darsatay astaamo cusub iOS 9.3, oo ay kujirto awooda lagu abuuri karo koontooyin badan oo isticmaaleyaasha ah iPad-ka waxbarashada.
Kuwani waa dhammaan wararka imaan doona macruufka 9.3
Apple maanta waxay sii deysay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3 oo leh waxyaabo badan oo cusub. Waan kuu sheegi doonaa dhammaantood, laakiin waxaan ka digaynaa inay yar yihiin.
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.3 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3 dhowr daqiiqo kahor. Waxay sidaas sameysaa marka macruufka 9.2.1 aan wali si rasmi ah loo sii deyn.
Jailbreak loogu talagalay macruufka 9.2.1 horeyba wuu u jiray
Screenshots-ka iPhone 6 oo leh iOS 9.2.1 iyo Cydia ayaa la muujiyay
Sida loo ogaado mudada ay ku qaadaneyso iPhone-keena in la nasiyo ka dib markii la rakibey tweak
Farsamadan ayaa noo oggolaaneysa inaan ku darto bar horumarka iPhone-keena si aan u ogaano horumarka markaan sameyno nasasho.
Apple waxay soo saartay daqiiqado yar kahor beta-kii labaad ee iOS 9.2.1, beta oo, waqtigan xaadirka ah, ay heli karaan oo kaliya horumariyeyaasha.
BigBoss repo dib ayaa loo naqshadeeyay bilawga sanadka
Dib-u-dejinta ugu weyn ee 'Cydia', 'BigBoss' waxay hadda soo saartay naqshad cusub oo toos ah bilawga sanadka.
Hore, hadda iyo mustaqbalka Jailbreak ee iOS 9
Dhammaan kuwa hadda ku yimid macruufka oo wax yar ku lumay arrinta Jailbreak waxaan ku tuseynaa xaaladda hadda ku jirta iOS 9
Maaha markii ugu horeysay ee ay dhacdo, laakiin waxay Apple ka dacweeyeen cillad soo wajahday nidaamkeedii ugu dambeeyay ee mobilada, iOS 9.
Waad ku mahadsantahay tweakkan, waxaan ku dari karnaa shaqooyin cusub kamarada 3D Touch menu ee iOS 9
Sida loo isticmaalo 3D Touch si loogu daro heesaha liiska Apple Music
Farsamadan ayaa noo oggolaaneysa inaan adeegsanno tikniyoolajiyada '3D Touch' si aan ugu darno heeso liiska cayaarta adoo riixaya oo haya farta shaashadda.
Sida loo xiro dhammaan tafaariiqda Safari ee iibka ee iOS 9
Waad ku mahadsantahay tweak-gaan, waxaan ku xiri karnaa daaqadaha oo dhan bog furaha Safari ee ku jira ipad daqiiqad.
Sida loo abuuro koonto sameeysa bilaash ah kuna xirnaato Xcode
Waxaan kuu sharraxeynaa tillaabooyinka lagu abuurayo koonto horumarineed oo bilaash ah iyo sida loola xiriiriyo 'Xcode' si loogu rakibo barnaamijyada taleefannadaaga iPhone, iPad iyo Apple TV
Sida loo xiro dhammaan tabiyada Safari hal mar
Tilmaamkan waxaan ku xiri karnaa dhammaan Safari-yada mar kale sidii noocyadii hore ee iOS.
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 9.1. Hadda kaliya iOS 9.2 ayaa lagu rakibi karaa
Apple waxay joojisay inay saxiixdo macruufka 9.1, sidaa darteed waxaad kaliya rakibi kartaa iOS 9.2 ama mid ka mid ah macruufka 9.2.1 betas.
Sida loogu daro macruufka saamiga macruufka barnaamijka YouTube
Waad ku mahadsantahay tweak-kan waxaan u badali karnaa liiska saamiyada ee barnaamijka YouTube midka midka asal ahaan ka yimaada macruufka
IOS 9.2.1 waxay umuuqataa inay hagaajineyso waxqabadka aaladaha duugga ah
Waxay u muuqataa in Beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.2.1 uu hagaajiyay waxqabadka iPhones-ka iyo ipad-da hore.
IOS 9.2.1 Imtixaanka Waxqabadka ee Qalabka Dhaxalka
Waxaan ku tusineynaa dhowr tijaabo oo waxqabadka ah ee iOS 9.2.1 qalabka ugu halyeeyga ah
Ma sugin sugid dheer. 24 saacadood ka dib kii ugu horreeyay ee loogu talagalay soo-saareyaasha, Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.2.1.
IOS 9 waxaa laga helay 71% qalabka
IOS 9 durba waa 71% aaladaha hada shaqeeya.
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 9.2.1 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.2.1 ee loogu talagalay soo-saareyaasha daqiiqado yar ka hor. Waqtigan xaadirka ah, ma jiro qaab dadweyne.
Ma mudan tahay in laga baxo macruufka 9.1 ilaa macruufka 9.2?
Mar labaad waxaan haynaa falanqaynta fiidiyowga ee isbarbardhigga udhaxeeya iOS 9.1 iyo iOS 9.2 si aan u aragno inay runti mudan tahay in la cusbooneysiiyo nidaamka qalliinka.
Auxo 3 ayaa hadda ku habboon macruufka 9
Auxo 3 horey ayaa loo cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaado macruufka 9
macruufka 9.2 wuxuu soo bandhigayaa soo dejinta sawirada laga soo bilaabo Hillaaca ilaa adabtarada USB
Kuwa doorbida soo dejinta sawir dhaqameedka ah waxay ka sameyn karaan hillaaca illaa adabtarada USB-ga leh iOS 9.2.
Apple wuxuu ku darayaa goobo cusub oo Spain iyo Mexico ah Khariidadaha
Apple kaliya waxay ku dartay 11 magaalo oo cusub oo leh aragtida Flyover
Pangu wuxuu ka shaqeynayaa Jailbreak iOS 9.2
Waxay umuuqataa inaanan waqti badan ku qaadan doonin inaan ku raaxeysano Jailbreak iOS 9.2
IOS 9.2 Iskuxirka Soodejinta ee iPhone, iPad iyo iPod Touch
Xiriirrada tooska ah ee IOS 9.2 ee Dhammaan Qalabka
Ma dhihi karno waxaa nala qabtay lama filaan, laakiin waxaan joognay xaflad ka dhacday Spain. Apple ayaa hadda sii deysay macruufka 9.2, iyo wixii cusbooneysiin ah.
Sida loo ogaado tirada khaladaadka aan rakibnay
Isbeddelkaas waa mid aad u fudud in la ogaado tirada isbeddelada aan ku rakibnay iPhone-keena.
Ku dhaqaaji 3D Touch Peek & Pop hawsha ogeysiinta
Thanks to tweak 3DNotificacions waxaan ku dari karnaa howlaha Peek & Pop ee ogeysiisyada ku saabsan iPhone duug ah
Tilmaamkan waxaan ku awood siin karnaa habka trackpad ee iPhones ee aan ku dhafan shaqadan asal ahaan
Sida loo kiciyo Muuqaalka Kala-baxa ah ee Jailbroken iPhone
Isku-darka 'Splitify tweak' wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku darnno kala-jajabinta 'Split View iyo slide over function' iPhone-keena
Heerka korsashada ee iOS 9 waxay hadda mareysaa 70%.
Waxaan ku tusineynaa liiska 25 isbeddellada ugu fiican ee la cusbooneysiiyay ama ka muuqday Cydia bishaan oo dhammaad ku dhow.
Waxaan ugu dambeyntii ku raaxeysan karnaa Springtomize 3 tweak qalabkayaga leh iOS 9
Apple wuxuu sii daayaa beta afraad ee iOS 9.2. Waxaa jira nooc dadweynaha ah
Ma ahayn Talaadadii, laakiin naguma yaabin. Apple waxay sii deysay beta-kii afaraad ee iOs 9.2 oo ay ku taageerto Carabiga Siri
Lifaaqa wuxuu ku siiyaa menu-ka 3D Touch faylasha
Tifaftirka cusub ee hadda ku degay Cydia ee loo yaqaan Aprendix wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku shaqeyno codsiyada ku jira gudaha galka ayada oo aan la gelin.
Sida loo yareeyo isticmaalka xogta macruufka 9
Waxaan kuu soo qaadaneynaa talooyin aad u adeegsan karto si aad hoos ugu dhigto isticmaalka xogta moobilkaaga iPhone-ga oo wata iOS9.
Soosaaraha loo yaqaan 'Springtomize 3' ayaa hadda ku dhawaaqay in tweak-kani uu hadda la jaan qaadayo macruufka 9. Hadda waa inaan sugno inta laga helayo Cydia.
Sida loo rakibo emulator PlayStation ah iPhone-ka
Waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loogu raaxeysto ciyaaraha PlayStation ee iPhone-kaaga
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo rakibo barnaamijyada aan ku jirin App Store qalabkeena iOS iyo tvOs mahadsanidiin Xcode.
Isbarbardhiga xawaaraha ee udhaxeeya iOS 9.1 iyo iOS 9.2 beta 2 [Fiidiyow]
Halkan waxaa ah seddex fiidiyow oo isbarbar dhigaya hawlgalka iOS 9.1 iyo iOS 9.2 beta 2.
Dhibaatooyinka xagga iOS 9.1 si loogu xiro App Store, Apple Music iyo inbadan more.
Ma xasuusataa cayayaankaas ka hortagay ku xirnaanta App Store-ka macruufka 9.0.2? Waxay u muuqataa in arrimaha la midka ah ay la kulmayaan qaar ka mid ah dadka isticmaala macruufka 9.1
IOS 9.1 waxay sababtaa Aqoonsiga Taabashada inuu joojiyo u shaqeynta isticmaaleyaasha qaar
Labada nooc midkoodna amaan ma leh. IOS 9.1 waxay sababtaa Aqoonsiga Taabashada inuu joojiyo u shaqeynta tirada sii kordheysa ee isticmaaleyaasha.
Sida loo rakibo MovieBox-ka iPhone-ka oo leh iOS 9 aan lahayn Jailbreak
Tilmaamo yar oo aan ku tusineyno sida loo rakibo MovieBox qalabka leh macruufka 9 iyada oo aan lahayn Jailbreak.
Xeeladaysan waxay ku darsataa astaamaha 3D Touch Cydia
Farshaxanka 'Tactful tweak' wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhaqaajino menu-ka 3D Touch ee dalabka Lydia.
Sida loo xiro dhammaan tabiyada Safari markaad ka soo noqoneyso biraawsarka
Thanks to Cydia tweak browserbreadcrumbcleanup waan xiri karnaa Safari iyo tabs ka dib markaan si toos ah ula tashano
Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 9.0.2. Ka taxaddar haddii aad leedahay xabsi
Muddo ka dib aniga iyo iOS 9.1 dhexdeenna ah, Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 9.0.2. Ka taxaddar haddii aad leedahay JAILBREAK oo aad rabto inaad sii haysato.
Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.2
Apple waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.2 dhowr daqiiqo kahor dhowr astaamo cusub, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan ahayn tan ugu fiican ee lagu rakibo
Dhammaan wixii ku saabsan 3D Touch ee iPhones cusub
Waxaan falanqeyneynaa 3D Touch video, tiknoolajiyad la yaab leh oo beddeleysa sida aad u isticmaasho iPhone-gaaga
5 shay oo aad jeclaan doonto markaad cusboonaysiiso macruufka 9.1
Waxaan rabnaa inaan kuu sheegno shan shay oo aan u maleyno inaad jeclaan doontid cusboonaysiinta iOS 9.1, astaamaheeda, iyo waxqabadkeeda.
Liis cusub oo aan ku tusayno in ka badan 450 isbeddello ah oo maanta la jaan qaadaya macruufka 9
Haddii aad rabto inaad soo dejiso waraaqaha waraaqaha ee ogeysiisyada cusub ee Apple Watch, waxaan kuu daynaynaa xiriiriyeyaasha
Tweaks la jaan qaada macruufka 9 (V)
Liiska ugu dambeeyay ee tweaks-ka la jaan qaadaya iOS 9 iyo Jailbreak ee ragga ka socda Pangu ay sii daayeen dhowr todobaad ka hor
IOS 9.1 miyuu hagaajiyaa ismaamulka iPhone marka loo eego iOS 9.0.2?
Haddii aad horeyba isugu dayday macruufka 9.1 ee iPhone-kaaga, waxaad u badan tahay inaad garanayso jawaabta. Haddii kale, waxaan ku tusi doonaa isbeddelka is-maamul ee u dhexeeya iOS 9.1 iyo iOS 9.0.2
Apple waxay durbaba tijaabineysaa iOS 9.2
Waxaan hadda helnay cusbooneysiinta macruufka 9.1, laakiin Apple waxay durbaba tijaabineysaa nooca xiga, iOS 9.2. Muxuu noocan cusubi soo kordhin doonaa?
IOS 9.1 waxay dhaqaajisaa jawaabta degdegga ah ee WhatsApp
IOS 9.1 may keenin warar badan oo muhiim ah, laakiin waxay la timid mid muhiim ah, jawaabaha degdega ah ee WhatsApp.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.1. Waxaan kuu sheegeynaa warkooda oo dhan
Apple waxay soo saartay iOS 9.1 final. Waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah xoogaa emoji cusub ah iyo Kobcinta Sawirada Tooska ah.
Isbarbardhigga sawirada u dhexeeya iOS 9 iyo Android 6 Marshmallow
Ma rabtaa inaad aragto kala duwanaanshaha sawirrada u dhexeeya macruufka 9 iyo Android 6 Marshmallow? Halkan waxaan ku haynaa shaashadda shaashadda wax kasta oo muhiim ka ah labada nidaam.
Tweaks la jaan qaada macruufka 9 (IV)
Liiska cusub ee habeynta la jaan qaada macruufka 9
Liis cusub oo aan ku tusayno dhammaan isbeddelka maanta jira ayaa horeyba ula jaan qaadi kara iOS 9
Soosaaraha Sprintomize wuxuu ku andacoonayaa in maalmo yar gudahood ay sii deyn doonaan cusbooneysiinta tifaftirka macruufka 9.
Jailbreak, haa ama maya? Taasi waa su’aasha
Ma u qalantaa JAILBREAK macruufka 9? Waxaan isku dayeynaa inaan kaga jawaabno su'aashan doodo iyo diidmo
Taageerada Wi-Fi. Waa maxay iyo sida ay u shaqeyso
Waa maxay taageerada Wi-Fi? Sidee u shaqaysaa? Maqaalkani waxaan isku dayi doonaa inaan ka sifeyno dhammaan shakiga ku saabsan shaqadan cusub ee iOS 9.
WhatsApp mar kale ayaa la cusbooneysiiyaa si aan wax loo xallin
WhatsApp mar kale ayaa la cusbooneysiiyaa si loo xalliyo khaladaadkii shalay waxaana xaqiiqdu tahay inaysan waxba xalin.
Casharro aan ku tusinno dhammaan tallaabooyinka aad raacayso si aad u awood ugu yeelatid inaad ku xir-xirto qalabkeenna macruufka 9
Pangu wuxuu bilaabay Jailbreak iOS 9
Pangu waxay sii deysay Jailbreak loogu talagalay iOS 9, oo ku habboon dhammaan qalabka iyo noocyada 9.0, 9.0.1 iyo 9.0.2
Phishing cusub ayaa doonaya inuu xado furayaashaaga iCloud
Hanjabaad cusub oo qaab Phishing ah ayaa isku dayaysa inuu helo xogta marin u helkaaga iCloud. Waxaan sharaxeynaa sida looga fogaado.
WhatsApp waa la cusbooneysiiyay iyadoo la taageerayo 3D Touch iyo jawaab deg deg ah
WhatsApp ayaa la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaadi karto jawaabta degdegga ah ee iOS 9 iyo taabashada 3D ee iPhone-yada cusub.
IOS 9 waxay na siisaa adeegsi faahfaahsan ee codsiyada
IOS 9 waxay na siisaa tirakoob ku saabsan isticmaalka oo ka faahfaahsan macruufka 8, halkaasoo aan ku arki karno saacadaha batteriga ee ay adeegsadaan codsiyada
macruufka 9 ma ogola inuu nuqulo codsiyada ku jira iTunes
IOS 9 mar dambe lama jaanqaadi karto iTunes, ugu yaraan xilligan, waana in "barnaamijka daallan" ee macruufka 9 uusan u oggolaanayn iPhone inuu nuqulo barnaamijyadiisa iTunes.
Sida loo arko faylasha iCloud Drive ee qalabkaaga
IOS 9 waxaa jira suurtagalnimada in la arko wax kasta iyo wax kasta oo ku kaydsan iCloude Drive-kaaga iPhone-ka, iPod taabashada, iPad-ka, iyo xitaa Mac-dayada
Facebook Messenger wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Watch
Facebook aad ayey ugu fududahay in la cusbooneysiiyo barnaamijyada kale ee aan ka aheyn shabakadda bulshada.
Khiyaano yar ayaa noo ogolaaneysa inaan galino galka galalka iOS 9 iyadoon loo baahneyn Jailbreak
Sida loogu daawado Sawirro Toos ah qalabkii hore
Daawashada animations Sawirrada tooska ah ee aaladaha duugga ah waa mid aad u fudud, waana sharxi doonaa sida.
Wax ka baro astaamaha cusub ee kumbuyuutarka QuickType ee loogu talagalay iPad-ka iOS 9
Kiiboodhka cusub ee iOS 9 ee iPad-ka wuxuu keenaa bar-toobiye oo leh xiriiriyeyaal deg-deg ah oo ku saabsan shaqooyinka qoraalka la soo geliyo sida jarista, nuqul, dhejiska iyo farta
Sida loola wadaago Sawiro Live ah iOS 9
Sawirro animim ah ama Sawirro Live ah ayaa lala wadaagi karaa qalab kasta oo leh iOS 9 iyo xitaa Mac. Waan sharraxeynaa sida
Isbarbardhiga u dhexeeya macruufka 9.1 B3 iyo macruufka 9.0.2 ee iPhone 5s
Fiidiyowyadan waxaad ku arki kartaa isbarbardhigga waxqabadka ee u dhexeeya macruufka 9.0.2 iyo iOS 9.1 Beta 3 oo ah iPhone 5s.
IOS 9.0.2 xiriiriyeyaasha soo dejinta ee dhammaan aaladaha
IPad News waxaan kuugu soo qaadaneynaa xiriiriyeyaasha soo dejinta macruufka 9.0.2 ee dhammaan qalabka la jaan qaada.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.1 beta 3 ee loogu talagalay horumarinta iyo nooca dadweynaha
Isla waqtigaas macruufka 9.0.2, Apple sidoo kale waxay sii deysay macruufka 9.1 beta 3 ee loogu talagalay soo-saareyaasha, cusbooneysiin ka badan 200mb oo hagaajin karta nidaamka.